Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Guam » Ndị ọkachamara n'ọrịa shuga na ụlọ ọrụ AI na -aga Guam
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Guam • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • investments • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Technology • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Ndị isi ahụike Guam na-ejikọ aka na ndị ọkachamara n'ịgwọ ọrịa teknụzụ ọrịa shuga ka ha mee nyocha nke ọgụgụ isi mere na Guam.
Ọmụmụ ihe a ezubere ga -elekwasị anya n'ịchịkọta data nlekọta ahụike sitere na isi mmalite dị iche iche yana itinye AI n'ọrụ iji chọpụta ihe ndị dị oke egwu ma nye nghọta n'ịgwọ ndị ọrịa na -arịa ọrịa shuga.
Ahụike AI bụ ọkachamara n'iji AI na IoT na -enye usoro nlekọta ahụike dị mfe nke na -arụ ọrụ n'ime ụwa n'ezie taa, na ọnụ ahịa dị ọnụ ahịa, nke dabara na nzuzo.
Onye ga -eduzi ọmụmụ ahụ ga -abụ ụfọdụ ndị ọkachamara ahụike kachasị elu n'ụwa na ọrịa shuga, ahụike na teknụzụ - ọkachasị na ọgụgụ isi mmadụ na teknụzụ wearable.
Guam Regional Medical Center (GRMC), American Medical Center (AMC), na Calvo's SelectCare kwupụtara taa na ha esonyela na AI Health ịmalite mmekorita nyocha iji weta nyocha ahụike ọgụgụ isi (AI) na agwaetiti Guam. Ọmụmụ ihe a ezubere ga -elekwasị anya n'ịchịkọta data nlekọta ahụike sitere na isi mmalite dị iche iche yana itinye AI n'ọrụ iji chọpụta ihe ndị dị oke egwu ma nye nghọta n'ịgwọ ndị ọrịa na -arịa ọrịa shuga.
Onye ga -eduzi ọmụmụ ahụ ga -abụ ụfọdụ ndị ọkachamara ahụike kachasị n'ụwa na ọrịa shuga, ahụike na teknụzụ - ọkachasị na ọgụgụ isi mmadụ na teknụzụ wearable. Ndị Ahụike AI Kọmitii Ndụmọdụ gụnyere David C. Klonoff, MD (onye ọsụ ụzọ na Teknụzụ Diabetes); na Francisco J. Pasquel, MD (onye ọkachamara n'ịchọpụta nlekọta nke ọma n'ọrịa shuga shuga).
Ọrịa shuga ka bụ nnukwu nsogbu ahụike ọha na -emetụta ndị Asia, Native Hawaiian, na Pacific Islander. Dika data kacha ọhụrụ sitere na CDC, ọrịa shuga na Guam dị elu karịa n'ọtụtụ akụkụ US, n'etiti ndị okenye nke ihe nketa Chamorro bụ 18.9% - ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu n'ime isii.
Guam bụ ebe dị mma iji amụ AI na -amụ ọrịa shuga. "Guam nwere ọnọdụ pụrụ iche iji mepụta mmetụta bara uru na gburugburu ọmụmụ ahụ n'ụwa niile, nke kachasị mkpa, nye anyị ohere ịhapụ ihe nketa dị mma nke inwe mmetụta na obodo maka ndị na -arịa ọrịa shuga," Dr. Klonoff kwuru. “Ọ bụghị naanị na Guam na -enye anyị nlele nnọchite anya nke ukwuu maka ọmụmụ ihe anyị, kamakwa ọ na -enyekwa anyị ụdị agbụrụ dị iche iche, ọnụnọ nke ọtụtụ ọrịa na -adịghị ala ala, yana obodo ahụike ọkaibe. Agwaetiti a pere mpe nke ukwuu ka anyị nwee ike duzie ọmụmụ a na -achịkwa yana nke ọma, ebe anyị nwere ike itinye aka na ọtụtụ ndị nwere oke na gburugburu ebe obibi ahụike. ”
Site na mmekorita ya na ụlọ ọgwụ, ndị na -enye mkpuchi, ndị na -ahụ maka nlekọta, ndị ọrịa na ụlọ nyocha Guam, ụlọ ọrụ teknụzụ Ahụike AI na -achọ iwekọta ozi dị oke mkpa site na isi mmalite ndị a niile n'ime usoro ọgụgụ isi ya. Ozugbo achịkọtara, ndị otu ahụ ga -etinye ọtụtụ usoro AI iji mee ka ndị ọrịa dị iche iche, buo amụma ọrịa na -aga n'ihu, ma chọpụta ohere ahaziri iche maka ntinye aka n'oge iji meziwanye nsonaazụ ndị ọrịa.
Ogige Ahụike Mpaghara nke Guam ga -arụ ọrụ dị ka Kọmitii Nyocha n'ime maka ọmụmụ ihe ahụ. "GRMC nwere obi ụtọ inye aka na njikọta nyocha a na -atọ ụtọ nke anyị nwere olile anya na ọ ga -eweta mmalite nke oge ọhụrụ na nlekọta nke ndị na -arịa ọrịa shuga, ọ bụghị naanị na Guam kamakwa n'ụwa niile," Onye isi nlekọta ahụike GRMC Dr. Ọnye na -bụ Alexander Wielaard?